एयर बस जस्ता लुम्बिनी-काठमाडौं च’ल्ने गाडी, यस्ता छन् विशेषता – Khabarhouse
एयर बस जस्ता लुम्बिनी-काठमाडौं च’ल्ने गाडी, यस्ता छन् विशेषता
Khabar house | ६ मंसिर २०७७, शनिबार ०९:१८ | Comments
काठमाडौं : को’रोना भाइरस संक्रमणको समयमा यात्रुको सुरक्षा लाई मध्यनजर गर्दै सिद्धार्थ सार्वजनिक यातायात प्रालि. भैरहवाले अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न बस सेवा सञ्चालन गरेको छ । सिद्धार्थ सार्बजनिक यातायात प्रालिले देखी लुम्बिनी भैरहवा काठमाडाैं सुबिधा सम्पन्न बस सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
कोभिडको समयमा बसको यात्रालाई सुरक्षित बनाउनका लागी बिभिन्न सुरक्षात्मक उपायहरु अपनाएर बस सेवा संञ्चालनमा ल्याएको प्रालिका अध्यक्ष सन्जिब रोक्काले जानकारी दिए । बसमा यात्रा गर्दा महिला मैत्री र कोभिडबाट जोगिनका लागि सुरक्षात्मक उपायहरु अपनाएर सेवा सञ्चालन गरिएको उनले बताए । बिशेष गरी बस महिला मैत्री रहेको रोक्काले बताए ।
रातिमा यात्रा गर्ने महिलाहरुलाई छुट्टै सिटको व्यवस्था रहेकाले महिलाहरूका लागि बढी सुरक्षित रहेको उनले बताए । यात्राको क्रममा माक्स, पन्जा, सेनिटाइजर, खाजा लगायतको सेवा बसमा उपलब्ध गराएको बसका सञ्चालकले बताएका छन् । बस दैनिक सञ्चा लन रहने छ । करिब ४ करोडको लागतमा ४ वटा बसबाट सेवा सुरु भएको हो ।
हरेक दिन साझ ७ बजे लुम्बिनीबाट बस सञ्चालन रहने छ। तीस सिट क्षमताको बसमा एका तर्फ दश वटा महिलाहरुको लागि सिंहल सिट रहेको छ । पछिल्लो समय कोभिडका कारण दुरी कायम गरी बस्नका लागि समेत बस उपयुक्त रहेको बसका सञ्चालकहरु को दाबी छ । समितिले सार्बजनिक सेवालाई गुणस्तरीय बनाउँदै लैजाने क्रममा नयाँ सुबिधा सम्पन्न एसी बस सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो। भैरहवामा निर्माणधिन विमानस्थल सम्पन्न भए लगतै भैरहवा लुम्बिनी स्तरीय बस सेवा सञ्चालनको तयारीमा प्रालि रहेको प्रालि का अध्यक्ष रोक्काले जानकारी दिए ।
लुम्बिनी भैरहवा बुटवल हुँदै काठमाडौंसम्म पहिलो पटक कोभिड–१९ लाई मध्यनजर गर्दै ३० सिटको ४ वटा बस सञ्चालनमा ल्याइएको रोक्काले बताए । टाटा कम्पनीको बसमा ४० सिट क्षमता भए पनि कोरोनाको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै ३० सिटको लक्जरियस बस सञ्चालन गरिएको छ । ‘उक्त बस महिला मैत्री समेत छ, जसमा १० सिट छुट्टै राखिएको छ,’ रोक्काले भने ।
भाडादर १ हजार तोकिएको सिद्धार्थ सार्वजनिक यातायात प्रालिका सल्लाहकार मनिष कुमार जोशीले बताए । लुम्बिनीदेखि सांझ ७ बजे, भैरहवाबाट रातीको ८ बजे र बुटवल बाट रातीको पौने ९ बजे छुट्ने गरी बसको तालिका तयार गरिएको छ । काठमाडौं बाट साँझको ७ बजेदेखि गाडी छुट्नेछन् ।
६ महिनाको हुँदा आमा बित्नुभयो, आमाको मामिलामा म अभागी थिएँ !
शिवपुरीमा आगलागी, सिम्रिक एयरलाइन्सको हेलिकाेप्टरबाट पानी हाल्ने तयारी
विश्वकै दोस्रो ठूलो बैहितान आयोजनाको बाँ’धमा पानी भर्न सुरु, १६ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने
चितवन माडीको अयोध्यापुरीमा राखिने राम-सीताका मूर्ति रथयात्रा सहित ल्याइने
२६ हजारको मास्क लगाएपछि करीनाले दिईन यस्तो प्रतिक्रिया !
विद्यालयमा खाजा पकाउँदै आएका दलित किन हटाइए ?
© Copyright Sidhakura online